डा. दिनेश धरेल - कान्तिपुर समाचार
घरमा नवजात शिशुको आगमन हुँदा खुसी र उत्साहसँंगै परिवारमा एक प्रकारको बेचैनी पनि सुरु हुन्छ । जन्मेको पहिलो केही हप्तामा बच्चामा देखिने शारीरिक परिवर्तन, रुवाइ, सुताइ, खानपान, प्रतिक्रियासंँगै तपाईको अनुभूति तीव्र गतिमा फेरिँदै जान्छ । हरेक दिन कुनै न कुनै आश्चर्य पाउनुहुन्छ ।
खोप कति सुरक्षित ?
हालसालै सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको शिवगन्जमा बीसीजी खोप लगाएको केही समयपछि बेहोस भएर एकमहिने शिशुको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको खबर आयो । २/३ वर्षअघि झापामा एउटा शिशुको खोपका कारण मृत्यु भएको आशंकामा तनाव सिर्जना भई महिनौंसम्म खोप कार्यक्रम अवरुद्ध हुँदा त्यस घटनाको अनुसन्धानमा म पनि संलग्न थिएँ । यस्ता घटना बारम्बार भइरहेका छन् ।
मानव दूध बैंक
आमाको दूध शिशुका लागि अमृत समान हुन्छ । बच्चा र आमाको स्वास्थ्यमा स्तनपानले गर्ने फाइदाबारे सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । स्तनपानको दर बढाउन सक्यो भनेमात्र पनि संसारभरि वर्षेनि ८ लाखभन्दा बढी बच्चाको ज्यान बचाउन सकिन्छ ।
स्वास्थ्यसेवा संवेदनशील पेसा हो । यसका बहुआयामिक पक्षमध्ये आचरण वा नैतिकताको सवाल दिन–प्रतिदिन जटिल र थप महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ । मानव स्वास्थ्य जोडिएको विषयमा जेजति निर्णय हुन्छन्, ती सबैमा नैतिकता सम्बन्धी कुनै न कुनै सिद्धान्त वा अभ्यास जोडिएको हुन्छ ।
तपाईं तीन–चार वर्षको बच्चालाई सुत्ने बेला खेलौना राख्न वा भिडियो बन्द गर्न भन्नुहुन्छ, ऊ मान्दैन । त्यतिबेला के गर्नुहुन्छ ? जब बच्चा गृहकार्य गर्न वा पढ्नको सट्टा खेल्नमात्र खोज्छ र कुनै दिन स्कुलमा शिक्षकको पिटाइ पनि खान्छ भन्ने सुन्नुहुन्छ, कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ ?
डा. दिनेश धरेलका लेखहरु :
बच्चालाई सुईको डर
बच्चाले कुनै खानेकुरा खान मानेन, रोयो वा कुनै बिज्याइँ गर्‍यो भने डाक्टरले सुई लगाइदिनुहुन्छ भनेर उसलाई तर्साई लाइनमा ल्याउन कोसिस गर्नुभएको छ ? गर्नुभएको छ भने त्यसालाई त्यागिहाल्नुस् ।
एन्टिबायोटिक्स लिनु अगाडि तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिन उत्प्रेरित गर्दै यो वर्ष पनि नोभेम्बर १३ देखि १९ सम्म नेपाल लगायत संसारभरि नै जनचेतना सप्ताह मनाइयो । तर वर्षभरिका बाँकी ५१ साता एन्टिबायोटिक्सको उचित प्रयोगबारे कत्तिको सचेत रहिरहन्छौं त ?
स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको प्रश्न
हामी चाहन्छौं कि हामीले उपभोग गर्ने सबै वस्तु तथा सेवा गुणस्तरीय होउन् । अझ मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य सेवासँग त हामी झनै सम्वेदनशील हुने गर्छौं र हुनु पनि पर्छ ।
हामी चाहन्छौं कि हामीले उपभोग गर्ने सबै वस्तु तथा सेवा गुणस्तरीय होउन् । अझ मानव जीवनसँंग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य सेवासँग त हामी झनै सम्वेदनशील हुने गर्छौं र हुनु पनि पर्छ ।